Xildhibaano raali gelin weydiistay inay Dowladda Somaliya ka bixiso dhibaato ay ka geysatay Muqdisho -VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaano raali gelin weydiistay inay Dowladda Somaliya ka bixiso dhibaato ay ka geysatay Muqdisho -VIDEO
Xildhibaanada Beelaha Hawiye ee ka tirsan Baarlamaanka Federalka ee Somaliya, ayaa waxay maanta Dowladda Somaliya ay weydiisteen inay raali gelin ka bixiso dhibaatadii, ay Jimcihii ka geysatay Degmada Wadajir.
Xildhibaanada oo shalay iyo maantaba kulamo ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa waxay gelinkii dambe ee maanta ka soo saareen Bayaan, ay ku cadeeyeen in Dowladdu ay dhibaato ka wado Magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Finish), ayaa waxa uu sheegay inaan la aqbali karin in lagu duulo dad gaar ah, iyadoo markaasi lagu dul dagaalamo bulshada ku nool Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka, ayaa ku waramaaya in dadka oo hurda lagu argagax geliyay hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dhibaato loo geystay buu yiri maato badan, oo wax dhibaato ay geysteen aan la arag.
Wuxuu sidoo kale uu cambaareeyay iyadoo waan-waan wax lagu raadin karo, in Xukuumada C/weli Sheekh Axmed ay xal mooddo sida uu yiri dagaal, iyadoona uu Sharci daro ku tilmaamay duulaankii Jimcihii.
Xildhibaan Cumar Finish, ayaa waxa uu Xukuumadu weydiistay in ay raali gelin ka bixiso dhibaatadii, ay Jimcihii ka geysatay Degmada Wadajir ee Galbeedka Magaalada Muqdisho, haddii kalana ay la imaan doonaan Sharci ay kaga falcelinayaan.
Xildhibaan C/weli Maxamed Qanyare oo ka barbar hadlaayay Xildhibaan Cumar Finish, ayaa dhinaciisa sheegay in hawlgaladaan ay yihiin kuwo sharci daro ah, isla-markaana aanu Baarlamaanku ansaxin hindise sharciyadeedka hubka wax dila.
Waxa uu intaa ku daray in hawlgaladu ay u arkaan mid ay Xukuumadu kaga faa’iideysanaayo, fasaxa ay ku maqan yihiin Mudanayaasha Baarlamaanka, haddii aynaan la sugin inta dib looga furaayo fadhigii 5-aad ee Baarlamaanka.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayaa hawlgalada ka soconaayo Magaalada Muqdisho waxa uu ku fasiray mid lagu bartilmaameydsanaayo beel iyo shakhsiyaad gaar ah, sida uu yiri.
Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka ahna Wasiirka Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ee Xukuumada Somaliya Ridwaan Xersi Maxamed, ayaa wuxuu meesha ka saaray in Xukuumadu ay duulaan ku tahay beel ama shakhsiyaad gaar ah, balse ay duulaan ku tahay hubka wax gumaada.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta oo Sabtidii Saxaafada kula hadlay Villa Somalia, ayaa tilmaamay in tallaabadaan ay qayb ka tahay xaqiijinta ammaanka Magaalada Muqdisho.